Society – SOOMAALPEDİA
wararka ka hadlaya dhanka bulshada.
Olole Nadaafadeed oo soconaya mudo bil ah ayaa saaka ka bilowday xaafadaha magaalada Garoowe ee xarunta Maamul gobaleedka Puntland,waxaana soo qaban qaabisay dowladda hoose ee degmada Garoowe. Xoghaya Dowlada hoose ee Garoowe Cabdiqafar Cabdirixmaan Axmed ayaa Sheegay inay har iyo habayn u taagan yihiin inay ka shaqeeyan nadafada Magalada waxaana uu ugu baaqay Shacabka Garoowe … More Sawiro:Olalaha nadaafada ee Garoowe oo korortay
Dhibanaha oo gaari BL ahaa laga saaray Deegaanka Shalambood, kuna sii jeeday Magaalada Marka, ayaa waxaa wadada u galay gaarigaasi maleeshiyaad hubeysan, kuwaa oo xoog gaariga ugala degay ninkii xanuunsanaayay. Maleeshiyadan oo gaariga ku joojisay Deegaanka Buufow oo qiyaastii 3km u jirta Magaalada Marka Ee Xarunta Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa isla Deegaankaasi Buufow ku toogtay … More War yaab leh, nin qaba xanuunka dhimirka oo loo dilay aano qabiil
War deg deg ah:Shacabka Muqdisho oo ku soo food leh arin ku cusub
Kadib Markii maalintii shalay gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho uu ku dhawaaqay in la keenay kaar cusub oo ay qaadanayaan muwaadiniinta Soomaaliya ayaa arintaasi waxaa hanjabaad kasoo saaray taliska booliska Banaadir. Cali Xersi Barre Cali Gaab taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay iney ka shaqeyn doonaan sidii loo dhaqan … More War deg deg ah:Shacabka Muqdisho oo ku soo food leh arin ku cusub
waxaa dhowaan tagay somaliland Anderson COOPER oo ah nin u ololeeya GAYnimada, waa is guursiga dadka isku jinsiyadaha ah. Ninkan oo laga mamnuucay wadamo badan oo islaam ah, laakiin nasiib daro Somaliland ayaa noqotay cidii ugu horeysay ee soo dhoweysa, bal ka daawo hoos.
sida aan wada ognahay tan iyo burburkii dawladeed waxaa soo jiray dalabyada ah in wax walba beesha caalamka looga sugo inta ay ka soo warceliso, hadii dhibaato jirtana dibada loo qeylin jirey. Bal ila daawada bulshada ku nool degmada wadajir oo isku kalsoonaaday, waxay ku guuleysteen dhismaha wado laami ah oo marta degmada ayagoon dawarsan … More “İskaa wax u qabso” oo ku sii fideysa muqdisho